လှိုင်သာယာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက လူနာ နဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်တဲ့ ခန့်စည်သူ – Suehninsi
လှိုင်သာယာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက လူနာ နဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်တဲ့ ခန့်စည်သူ
အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေနဲ့အတူ ဆယ်စုနှစ်တွေမက အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ပီပြင်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ တခဲနက်အားပေးမှုတွေ များစွာရရှိထားတဲ့ ကိုခန့်ကတော့ လှူဒါန်းမှုတွေကိုလည်း ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လေ့ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ အခုတစ်ခါမှာလည်း လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ
တာဂန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူနေကြတဲ့ လူနာတွေအတွက် အခြားအနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နော်..။ “ယနေ့အလှူ…. လှိူင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ဆရာဝန်များ၊သူနာပြုများနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအယောက် (၁၀၀)အတွက် ဘုရားစာအုပ်များနှင့် ဝင်းစန္ဒာအညာထမင်းဝိုင်းမှ ထမင်းနှင့်ဟင်းများကို
သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ တက်ရောက်ကုသနေကြသော လူနာများအတွက် မွှေးဆပ်ပြာခဲများ၊ ဆပ်ပြာဆီများ၊ Hand gelများ၊ မိုးတွင်းစီးဖိနပ်များ၊ ကယ်လ်စီယမ်ကွေကာထုပ်များ၊ ရွှေပုစွန် ငါးရံ့ခြောက်ထောင်းကြော်များ၊ မုန့်များ၊ သောက်ရေသန့်များ၊ သွားတိုက်ဆေးများ၊ လူနာတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အလှူငွေများကို မိမိတို့နိုင်သလောက်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြရာမှာ
ဆေးရုံအုပ်ကြီး Dr. ဆန်းလွင်ဦး၊ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး Dr. ကိုကိုသန်း၊ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး(ဆေးပညာ) Dr. ခင်ဇာလှိုင် တို့မှလက်ခံပေးခဲ့ကြပါတယ်..” ဆိုပြီး အလှူအမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ “လှူဒါန်းရန် စီစဉ်ပေးပါသော ဝင်းစန္ဒာအညာထမင်းဝိုင်းမိသားစု၊သမားတော်ကြီး(ဆေးပညာ)Dr. ခင်ဇာလှိုင် နှင့် ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းပေးကြပါသော အလှူရှင်များအားလုံးကို
ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ လှူဒါန်းလိုပါက…….. Dr. ဆန်းလွင်ဦး (ဆေးရုံအုပ်ကြီး)လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံ – (09)5093878 သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။..” ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့အတူ လှူဒါန်းလိုတဲ့ အလှူရှင်တွေအတွက်လည်း မျှဝေပြောပြထားပါသေးတယ်နော်..။ ခန့်စည်သူရဲ့ အလှူအမှတ်တရပို့စ်လေးအောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဝမ်းသာအားရ သာဓုခေါ်ဆုတောင်းစကားလေးတွေကိုလည်း ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်..။
အကယျဒမီသရုပျဆောငျ ခနျ့စညျသူကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုတှနေဲ့အတူ ဆယျစုနှဈတှမေက အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားသူပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။ ပီပွငျတဲ့ ဇာတျရုပျတှကွေောငျ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ တခဲနကျအားပေးမှုတှေ မြားစှာရရှိထားတဲ့ ကိုခနျ့ကတော့ လှူဒါနျးမှုတှကေိုလညျး ဆကျတိုကျပွုလုပျလရှေိ့သူလညျး ဖွဈပါတယျနျော..။ အခုတဈခါမှာလညျး လှိုငျသာယာပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးမှာ
တာဂနျထမျးဆောငျနကွေတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှနေဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူနကွေတဲ့ လူနာတှအေတှကျ အခွားအနုပညာရှငျတှနေဲ့အတူ လှူဒါနျးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျနျော..။ “ယနအေ့လှူ…. လှိူငျသာယာပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျနကွေသော ဆရာဝနျမြား၊သူနာပွုမြားနှငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးအယောကျ (၁၀၀)အတှကျ ဘုရားစာအုပျမြားနှငျ့ ဝငျးစန်ဒာအညာထမငျးဝိုငျးမှ ထမငျးနှငျ့ဟငျးမြားကို
သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ကွပါတယျ။ တကျရောကျကုသနကွေသော လူနာမြားအတှကျ မှေးဆပျပွာခဲမြား၊ ဆပျပွာဆီမြား၊ Hand gelမြား၊ မိုးတှငျးစီးဖိနပျမြား၊ ကယျလျစီယမျကှကောထုပျမြား၊ ရှပေုစှနျ ငါးရံ့ခွောကျထောငျးကွျောမြား၊ မုနျ့မြား၊ သောကျရသေနျ့မြား၊ သှားတိုကျဆေးမြား၊ လူနာတဈဦးခငျြးစီအတှကျ အလှူငှမြေားကို မိမိတို့နိုငျသလောကျသှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ကွရာမှာ
ဆေးရုံအုပျကွီး Dr. ဆနျးလှငျဦး၊ မကျြစိအထူးကုဆရာဝနျကွီး Dr. ကိုကိုသနျး၊ အထူးကုဆရာဝနျကွီး(ဆေးပညာ) Dr. ခငျဇာလှိုငျ တို့မှလကျခံပေးခဲ့ကွပါတယျ..” ဆိုပွီး အလှူအမှတျတရ ပုံရိပျလေးတှကေို ဝမြှေထားတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။ “လှူဒါနျးရနျ စီစဉျပေးပါသော ဝငျးစန်ဒာအညာထမငျးဝိုငျးမိသားစု၊သမားတျောကွီး(ဆေးပညာ)Dr. ခငျဇာလှိုငျ နှငျ့ ဝိုငျးဝနျးလှူဒါနျးပေးကွပါသော အလှူရှငျမြားအားလုံးကို
ကြေးဇူးအထူးပဲတငျရှိပါတယျခငျဗြာ။ လှူဒါနျးလိုပါက…….. Dr. ဆနျးလှငျဦး (ဆေးရုံအုပျကွီး)လှိုငျသာယာပွညျသူ့ဆေးရုံ – (09)5093878 သို့ဆကျသှယျလှူဒါနျးကုသိုလျယူနိုငျကွပါတယျခငျဗြာ။..” ဆိုပွီး ကြေးဇူးတငျစကားလေးနဲ့အတူ လှူဒါနျးလိုတဲ့ အလှူရှငျတှအေတှကျလညျး မြှဝပွေောပွထားပါသေးတယျနျော..။ ခနျ့စညျသူရဲ့ အလှူအမှတျတရပို့ဈလေးအောကျမှာတော့ ပရိသတျတှကေလညျး ဝမျးသာအားရ သာဓုချေါဆုတောငျးစကားလေးတှကေိုလညျး ကွညျကွညျနူးနူးလေး ပွောထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျနျော..။
Source : Kyaw Soe Win’s Facebook | Reference & Credit : Myanmarload
သက်ကြီးရွယ်အိုများ ခိုကိုးရာမဲ့နေသူများအတွက် မကြာခဏ အလှူအတန်းတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ထွန်းကိုကို